Date: 18 avril 2018 - 17:32
manimanina dia tonga mitsidika. Mbola ao daholo ve ianareo ry namana isany tato: Tatsambo, 1959-1966, Ra-pineur izay misy mitady etsy ambony, Jerika, Weinacht, Mr John B ary indrindra indrindra izy roa vavy, telo miaraka amiko.
Date: 20 avril 2018 - 22:39
Salut ticket de quai
Par: Mahery 21
Date: 21 avril 2018 - 12:12
Manahoana daholo o ?
I ra-pineur no vao tazako tany aminy faritr' Eoropa antsimo . Tsy afaka niresaka izahay fa izaho teny ambony tramway
Date: 25 avril 2018 - 10:39
Mahery 21 > Misaotra nanome vaovao.
I 1959-1966 toa any Dago raha arakiny ny nosoratany etsy ambony. I Jerika nisy fotoana nipetraka tany koa.
I Tatsambo, mino aho fa mbola aty izy, satria tsy mahafoy ny zafikeliny! N'est-ce pas Tatsambo? I weinacht koa torak'izany.
Date: 27 avril 2018 - 15:44
Ticket de quai,
za namana vaovao e, mpianatr i bahut taloha koa aho
Date: 27 avril 2018 - 18:25
salut > tonga soa ô.
Ianao niteny tetsy ambony hoe nahita an'i ra-pineur. Iray promotion ve ianareo?
Date: 27 avril 2018 - 18:28
salut > azafady fa diso aho :i Mahery 21 ay ilay nahita an'i ra-pineur fa tsy ianao!
Date: 25 mai 2018 - 16:15
Nankaiza ny olon tety?
Date: 25 mai 2018 - 21:24
Sendra ny jours fériés sy ponts be dia be dia mba nanararaotra nikorana niaraka tamin'ny ankizy e !
Ticket de quai , amin'ny boum de fin d'année scolaire izay karakarainy ny UNESCO eny @ lycée Rabearivelo,ho avy ihany ve ianao ?
"Salut" niara-nianatra ve nareo sy ra-pineur ? Raha niara-nianatra dia iray promotion izany isika fa mety tsy niray kilasy fotsiny